Jose Mourinho oo doonaya inuu Ruben Loftus-Cheek keeno Roma. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Jose Mourinho oo doonaya inuu Ruben Loftus-Cheek keeno Roma.
Tababaraha kooxda Roma ee Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa in uu xiddiga khadka dhexe ee kooxda chelsea ee Ruben Loftus-Cheek u calaamadsaday bartilmaameedka ugu horeeya ee kooxda reer Italy ka hor suuqa January.
Kooxda Serie A ayaa la filayaa inay xidigo lasoo wareegto inta lagu jiro suuqa jiilaalka, Mourinho ayaana la rumeysan yahay inuu go’aansaday inuu kor u qaado doorkiisa qeybta dhexe.
Sida laga soo xigtay Il Romanista , Roma ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo Loftus-Cheek, iyadoo kooxda Talyaanigu ay dooneyso inay heshiis amaah bilow ah la gasho ikhtiyaarka ay ku iibsan karto dhamaadka xilli ciyaareedka 2021-22.
Warbixinta ayaa sheegeysa in I Giallorossi uu doonayo inuu daboolo mushaarka xiddiga heerka caalami ee dalka England £ 170,000 isbuucii inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Loftus-Cheek ayaa ka faa’idaystay dhibaatada dhaawaca ee khadka dhexe ee Chelsea intii lagu jiray ololihii 2021-22 si uu u saftay 17 kulan tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 12 kulan oo Premier League ah.
Mustaqbalka fog ee 25-sano jirkaan ee Stamford Bridge ma cadda, inkastoo Blues la rumeysan yahay inay dooneyso inay la soo wareegto ciyaaryahan dhexe oo cusub sanadka 2022-ka.
GOOBAHA MADAXWAYNAYAASHU AY U DAL XIIS TAGAAN & JAWI DAGAN
Sharaxaada 9ka kursi ee reer Waqooyiga. Awoodda Farmaajo oo la tijaabinaayo.
Liiska: Arsenal oo amaah ku bixinaysa todoba ciyaartoy bisha January
Romelu Lukaku oo wajahaya tallaabo anshax marin ah oo uu kala...
Bixitaanka Ousmane Dembele oo u ogolaan doontaa Barcelona inay la soo...